တစ်ရက်ကို …..သိန်းချီပြီး ရောင်းကောင်းနေတဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်ရဲ့…. ရောင်းအားဘာကြောင့်ကောင်းလည်း -
တစ်ရက်ကို …..သိန်းချီပြီး ရောင်းကောင်းနေတဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်ရဲ့…. ရောင်းအားဘာကြောင့်ကောင်းလည်း
ကွမ်းဝယ်ရာတွင် စီးပွားရေးအမြင်အရ ကွမ်းရွက်သေးသေးကိုသာ ဝယ်ရမည်။ အရွက်သေးပါက ပိဿာလိုက် ဝယ်ယူရာတွင် ရွက်ရေများများပိုရသဖြင့် ကွမ်းယာအတွက်ပိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကွမ်းရွက်ကို အရင်း(အရိုး)ဘက်နှင့် အဖျားဘက်ကို ညှပ်ထားရသည်။
ကွမ်းရွက်ကို ရေဆေးပြီး ဒိန်ချဉ်နှင့်စိမ်ကာ ကွမ်းဘန်းထဲတွင် ညီညီညာညာမျှတ လှပအောင် စိမ်ထား နှပ်ထားပါက မိမိဆိုင်မှ ကွမ်းယာကို စားလိုက်သည်နှင့် နုနုညံ့ညံ့အရသာကို ရရှိစေပြီး စားသုံးသူများ အကြိုက်တွေ့စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထုံး ၃ပိဿာ၊ဆား ၅၀-သား၊ ကျောက်ချဉ် ၁၀-သားပထမအဆင့်ထုံးကို အင်တုံကြီးထဲတွင် ရေအနည်းငယ်ထည့်၍ ခြေပါ။
ကျောက်ချဉ် ၁၀-သားကို အမှုန့်ပြုပြီးထည့်ပါ။ နှံ့အောင်မွှေပါ အထက်အောက် နှံ့ပါက ဆား၅၀-သားကို ထည့်လိုက်ပါ နှံ့အောင်မွှေပါ။
ဒုတိယအဆင့်ရေနွေးဆူပြီးသားကို ထုံ ကျောက်ချဉ် ဆား ထည့်ပြီးသားထဲကို လောင်းထည့်ပြီးမွှေပါ။ ရေထည့်ပြီး ဖုံးအုပ်ပါ။ ၅-ရက်ခန့်ကြာသော်
ထုံးအိုးထဲမှ အရည်ကြည်များကို သွန်ပါ။ ရေအသစ်ကိုထည့်ပြီး တစ်ညအိပ် စိမ်ပါ၊ မနက်လင်းရင် အပေါ်ရေကြည်ကိုသွန်။ မြေအိုးမှာထည့်ပြီး ပွက်အောင်ကျိုပါ၊
မီးအနေတော်လောက် ဆူပွက်လာရင် အအေးခံထား၊အရေကြည်ကိုသွန်၊ရေပြန်ထည့်၊ ညသိပ်ပြီး မနက်တိုင်း ရေကြည်လဲပေးပါ၊နေ့စဉ်ရေလဲပေးရမည်။
တစ်နေ့စာထုံးကို ရေဖျော်ပြီး ပိတ်ပါးပါးနဲ့စစ်ချပါ။ ခဲ သလဲတွေစင်ပြီး နုညံ့တဲ့ထုံးကိုရမယ်။ ထုံးကို အချိုမှုန့်နည်းနည်း ဆားနည်းနည်းချိန်ဆထည့်ပါ။ ထုံးကို ရေဖျော်ရာမှာ ရေနွေးသုံးရမယ်။ ဒါက နည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
နောက်တစ်နည်းကထုံးကို အချိန်တစိဆယ် နှစ်ဆယ် စသည်ဖြင့် ဝယ်ထားပါ၊ ထုံးကို စဉ့်အိုးများတွင်ထည့်၍ ရေအပြည့်ထည့်ပြီး စိမ်ထားပါ၊
ထုံးရေကြည်များကို မကြာခဏ သွန်ပြီး ရေအသစ်ထည့်ကာ လဲလှယ်ပေးရမည်။တစ်ချို့သော ထုံးအိုးများမှာ နှစ်နှင့်ချီကြာအောင်ပင် ရေစိမ်ထားကြရသည်။
ထို့ကြောင့် ထုံးစပ်ခြင်း၊ ထုံးပေါက်ခြင်း အာနိသင်များ လျော့သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ထုံးအိုးများမှ ထုံးကို တစ်နေ့စာ ရောင်ကုန်မည့်အချိုးအစားကိုကြည့်၍အသုံးပြုရန် ယူရမည်။ ကြေးအိုး(သို့မဟုတ်)မြေအိုး စသည်တို့တွင် ထည့်ပြီး တစ်ညလုံးရေစိမ်ထားရမည်။
နံနက်ဘက်တွင် ရေကြည်များကို သွန်ပြီး ရေအသစ်ထည့်၍ နွားနို့နှင့်သမအောင် ရောမွှေကာ အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထုံးမှာ ဆွဲတိုင်း လိုက်ပြီး စားသုံးသူများမှာ အာပေါက်ခြင်း မရှိတော့ချေ။
သို့သော် နိုးရောစပ်ထားသော ထုံးမှာ တစ်နေ့သုံးဖြစ်သဖြင့် မကုန်လျှင် သွန်ပစ်ပြီး အိုးကို သန့်ရှင်းအောင် စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောထားရမည်။
ကွမ်းသီဈေးထဲမှ ညှပ်ပြီးရောင်းသော ကွမ်းသီးစိပ်များကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
ကွမ်းသီးဝယ်ကာ ကွမ်းသီးခြမ်းကို ရေဝအောင် စိမ်ပြီး ညှပ်ကာနေပူပူတွင် ကြွပ်အောင် လှန်းထားရသည်။
ယင်းနောက် မပြင်းလွန်း မပူလွန်းသော မီးရှိန်ရှိန်တွင် ကွမ်းသီးကို မတူးအောင် မချစ်အောင်လှော်ပေးရသည်။
ဤကဲ့သို့ လှော်ထားသော ကွမ်းသီးစိပ်မှာ စားရာတွင် ပျင်းတွဲခြင်းမရှိဘဲ ကြွပ်ကြွပ်ရွရွဖြစ်ပြီး စားသူ၏ သွားကို ဝါးချင်ပြီးရင်း ဝါးချင်လာအောင်စွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်။
ရှားစေးမှာ ထုံးနှင့်မိတ်ဘက်ဖြစ်သည်။ ထုံးများလျှင်လည်း စားမကောင်း၊ ရှားစေးများလျှင်လည်းစားမကောင်း ဖြစ်တတ်သည်။ ရှားစေးမှာ ထုံးကို နိုင်ပေသည်။
သို့ရာတွင် ရှားစေးမများဖို့ လက်အချိန်အဆ ကျွမ်းကျင်မှုလိုသည်။ ရှားစေးမှာ ထုံးကဲ့သို့ပင် အိုးထဲတွင် အရည်ဖျော်ကာ စိမ်ထားပြီး နံနက်ဘက်တွင် အဖန်ရည်များ သွန်ပစ်ကာ အာမွှေးဆီထည့်ပြီး သမပေးရမည်။
ရှားစေးအနံ့မှာ သင်းပျံ့ပျံ့နှင့် စားသုံးသူများ အကြိုက်တွေ့စေမည်ဖြစ်သည်။
ဆေးကို တစ်နေ့စာအတွက်သာ ကွမ်းတယာသုံး အရွယ်များ ညှပ်ထားပြီး လေးလံအောင်ထားရမည်။
ကျန်ဆေးများကို မကြာခဏ နေပူလှန်းပေးရမည်။
အစိုပြန်ခြင်မှ ကာကွယ်ရလေသည်။ လေသလပ်ကာ အစိုပြန်ပါက ဆေူအရသာမှာ ပူစပ်ခါးဖြစ်ပြီး အရသာမကောင်းချေ။ယင်းအတွက်ကြောင့် ဆေးကို စက္ကူဖြင့်ပတ်ပြီး စက္ကူပေါ်မှ အဝတ် (သို့မဟုတ်)အိတ်ဖြင့် ပတ်ထားရမည်။
အထက်ပါ ပစ္စည်များ စုံစုံလင်လင်ရှိပြီး ပြောပြထားသည့် လျှို့ဝှက်ချက်နည်းပညာအတိုင်း ကွမ်းယာဆိုင်ထောင်ကာ အသုံးပြုကြမည်ဆိုပါက မိတ်ဆွေ၏ ဆိုင်သည်
အဆင်ပြေ ပြီး လူကြိုက်များသော စားသုံးသူတို့ အသဲစွဲသော ကွမ်းယာဆိုင်ကောင်း တစ်ဆိုင်ဖြစ်မည်ဆိုတဲ့အကြောင်းစာချစ်သူ မိတ်ဆွေများနှင့် ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများအတွက် ဘဝတွင် လက်တွေ့အသုံးကျစေမည့်ကွမ်းယာ၏ လျှို့ဝှက်ချက်နည်းလမ်းအား စာရေးသူ သိရှိ မှတ်သားမိသမျှ စေတနာ ဆန္ဒအရင်းခံ၍ အသိအမြင် ဗဟုသု�တများ မျှ ဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။